२०५८ सालदेखि मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय दीपक दाहाल स्वास्थ्य र शिक्षाका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। सामाजिक मुद्दाहरुमा दक्खल राख्ने उनी खोजी पत्रकारितामा रुचि राख्छन्।
सुरुदेखि नै अनशनप्रति सरकार सकारात्मक थिएन। डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेको दुई साता बितिसक्दा पनि न सरकार सकारात्मक थियो, न डा.केसी पक्ष नै अत्तिएका थियो।
दीपक दाहाल १२ श्रावण २०७५ शनिबार १६ मिनेट पाठ
२२ बुँदे सहमतिमा के छ? (पूर्ण पाठ)
चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर विगत २७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन्।
दीपक दाहाल १० श्रावण २०७५ बिहीबार ९ मिनेट पाठ
२७ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भएको छ। जसमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने मुल बुँदामा लामो छलफलपछि विहीबार राति सहमति जुटेको छ। आफ्नो मुख्य माग पूरा भएपछि डा केसीले अनशन तोडेका छन्।
दीपक दाहाल १० श्रावण २०७५ बिहीबार १ मिनेट पाठ
२७ दिनदेखि अनशन डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भर्खरै सरकारी वार्ता टोली र डा केसीका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।
दीपक दाहाल १० श्रावण २०७५ बिहीबार २ मिनेट पाठ
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ।
आमरण अनशनको २५ दिन सुरु भएको डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता २४ घन्टा नबित्दै भंग भएको छ।
दीपक दाहाल १० श्रावण २०७५ बिहीबार १२ मिनेट पाठ
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेको २५ औं दिन मंगलबार डा. केसी र सरकारबीच वार्ता सुरु भएको छ ।
दीपक दाहाल ९ श्रावण २०७५ बुधबार १० मिनेट पाठ
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरुले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा आजबाट रिले अनशन सुरु गरेका छन्।
दीपक दाहाल ८ श्रावण २०७५ मंगलबार २ मिनेट पाठ
दीपक दाहाल ८ श्रावण २०७५ मंगलबार १३ मिनेट पाठ
न वार्ता, न उपचार
चिकित्सा शिक्षा सुधारका विविध माग राखी २४ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकार झन् उदासीन बनेको छ ।
दीपक दाहाल ७ श्रावण २०७५ सोमबार १२ मिनेट पाठ
प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, चिकित्सक तथा नागरिक अगुवाहरूले -यालीको अगुवाइ गरेका थिए। अधिकांश प्रदर्शनकारीले हातमा बेलुन बोकेका थिए।
दीपक दाहाल ६ श्रावण २०७५ आइतबार ११ मिनेट पाठ
स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने सोचमा आधारित केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव नै वाम सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
दीपक दाहाल ५ श्रावण २०७५ शनिबार १९ मिनेट पाठ
चिकित्सकहरु देशव्यापी हडतालमा
अनशनरत डा.गोविन्द केसीको ज्यानै जोखिममा पर्दासमेत निकासका लागि सरकार तत्पर नदेखिएको भन्दै चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार देशभर स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
दीपक दाहाल ३ श्रावण २०७५ बिहीबार ६ मिनेट पाठ
चिकित्सा शिक्षा सुधार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे मागसहित विगत १८ दिनदेखि अनशनमा रहँदै आएका डा. गाेविन्द केसीलार्इ हाइपोक्यालेमिया भएको छ। वार्ता टोली गठन नभएसम्म रगत परीक्षण नगराउने अडानका विच केही दिनयता रगतमा भएका परिवर्तनहरु थाह पाउन सकिएको थिएन। वार्ता टोली गठन भएसँगै रगत जाँच गराउँदा हाइपोक्यालेमिया देखिएको हो। चिकित्सकीय भाषामा रगतमा पोटासियमको मात्रा कम हुनुलाइ हाइपोक्यालेमिया भनिन्छ।
दीपक दाहाल १ श्रावण २०७५ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
१७ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कारबाहीको मागसमेत प्रमुख रूपमा उठाइरहेका छन्।
दीपक दाहाल १ श्रावण २०७५ मंगलबार २० मिनेट पाठ